धुलिखेल र शिर मेमोरियलमा अक्सिजनसहितको उपचार कक्ष तयार – Radio Roshi
कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो चरण सुरु भएसँगै काभ्रेमा रहेका धुलिखेल अस्पताल र शिर मेमोररियल अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचारक लागि अक्सिजनसहितको उपचार कक्ष तयारी अवस्थामा राखेका छन् । जिल्लाको धुलिखेल अस्पताल र बनेपामा रहेको शिर मेमोरियल अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको लागि अक्सिजनसहितको उपचार कक्ष तयार पारेका हुन् ।
धुलिखेल अस्पतालका प्रशासकिय निर्देशक डा. रमेश माकजुले स्वास्थ्य मन्त्रालय र धुलिखेल अस्पतालबीच कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचारको लागि एक सय शैयाको उपचार कक्ष तयार गर्ने सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अस्पतालले तत्कालको लागि कोभिड बिरामीको उपचारको लागि अक्सिजनसहित २५ शैयाको हाई डिपेन्डेड युनिट (एचडियू) तयारी गरेको बताउनुभयो । उहाँले एचडियू अन्तर्गत चार शैया आइसियु रहेको बताउनुभयो । डा. माकजुले बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको खण्डमा कोभिड बिरामीको उपचारका लागि एक सय शैयामा बिस्तार गरिने बताउनुभयो । उहाँले एक सय शैया क्षमतामध्ये एचडियू ५० शैया र सामान्य (जनरल) ५० शैया बनाइने बताउनुभयो ।
उहाँले अस्पतालको आफ्नै दुई वटा अक्सिजन प्लान्ट रहेको बताउँदै ठुलो प्लान्टबाट २४ घण्टामा छ हजार लिटरको ५९ सिलिण्डर र सानो प्लान्टबाट २४ घण्टामा १५ देखि २० सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन हुने बताउनुभयो । उहाँले ठुलो प्लान्टको अक्सिजन अस्पतालको बेडहरुमा र सानो प्लान्टको अक्सिजन कोभिड अस्पतालमा जडान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अस्पतालको प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजनले कोभिडको बिरामीको उपचारका लागि नपुग्ने भएकोले सिलिण्डरको अक्सिजन समेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो ।
प्रशासकिय निर्देशक डा. माकजुले अस्पतालसँग १२५ वटा अक्सिजन सिलिण्डर रहेको बताउनुभयो । ‘हामीसँग रहेको सानो अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजनबाट एक दिनमा करिब २० जना बिरामीलाई पुग्छ, अन्य बिरामीलाई भने सिलिण्डरको अक्सिजन नै प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ’ उहाँले थप्नुभयो–‘एक सय २५ सिलिण्डर अक्सिजनले एक सय बिरामीलाई ४ दिनको लागि पुग्छ’ । उहाँले एक सयभन्दा बढी बिरामी भएको खण्डमा सबैलाई अक्सिजन दिन समस्या हुने बताउनुभयो ।
बनेपामा रहेको शिर मेमोरियल अस्पतालले पनि अस्पतालमा आउने कोरोनाका बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजनसहितको २० शैयाको उपचार कक्ष तयार पारेको छ । अस्पतालका निमिक्त प्रमुख सुन्दर थापाले गत वर्ष डिसिसिएमसीको निर्देशन र अस्पतालको दायित्व अन्र्तगत २० शैयाको उपचार कक्ष तयार पारिएको बताउँदै यस वर्ष पनि सोही कक्षलाई उपचारको लागि प्रयोग गरिने बताउनुभयो । उहाँले अस्पतालको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट रहेको बताउँदै प्लान्टबाट २४ घण्टामा २५ सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन हुने बताउनुभयो । उहाँले अस्पतालको प्लान्टले नधानेको खण्डमा पनौतीमा रहेको नवज्योती ग्यासेस प्रालिबाट आवश्यक अक्सिजन सिलिण्डर ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
पनौती नगरपालिका–५ ढलमलेमा रहेको नवज्योति ग्यासेस प्रालिका व्यवस्थापक प्रकाश थापाले काभ्रेमा रहेको धुलिखेल, शिर मेमोरियल अस्पताललाई चाहिएको जति अक्सिजन उपलब्ध गराउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले उद्योगमा रहेका दुई वटा प्लान्टबाट दैनिक रुपमा नौ सय सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन हुने बताउँदै काभ्रेका अक्सिजनको लागि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । व्यवस्थापक थापाले दुई हप्तादेखि उद्योगमा अक्सिजनको माग बढेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख डा. नरेन्द्रकुमार झाले स्थानीय तहमा रहेका अस्पतालहरुलाई अक्सिजन सिलिण्डर भरेर राख्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । उहाँले काभ्रेका १३ स्थानीय तहमा ३० वटा ठुलो अक्सिजन सिलिण्डर पठाइएको बताउनुभयो ।
कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो चरण सुरु भएपछि काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलसहितको एक टोलीले पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको नवज्योति ग्यासेस प्रालिको अनुगमन गर्नुभएको छ । उहाँले अनुगमनका क्रममा उद्योगले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने बताए पनि सिलिण्डरको अभाव देखिएको बताउनुभयो । ‘कम्पनीसँग करिब १३ हजार सिलिण्डर रहेछ, आधा सिलिण्डरहरु अस्पताल तथा व्यक्तिहरुसँग रहेकोले अहिले करिब सात हजार मात्रै सिलिण्डर चालु रहेको देखियो’ उहाँले थप्नुभयो । प्रजिअ पोखरेल नेतृत्वको अनुगमन टोलीले डाक्टरको सिफारिस बिना व्यक्तिगत रुपमा घरमा अक्सिजन राख्नेलाई नदिन तथा कुनै पनि कम्पनीको सिलिण्डर भर्न आएको खण्डमा भरेर पठाउन निर्देशन दिएको थियो । –गोरखापत्र अनलाईनबाट